Ny fizotran'ny fampiharana ny maha-olompirenena an'i Saint Lucia | Ny zom-pirenen'i Saint Lucia
Fampiharana ny fizotran'ny Olomasin'i Saint Lucia
Ny Birao zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola dia handinika fangatahana ho an'ny zom-pirenena ary ny vokatra dia mety hanome, mandà na manemotra ny antony, fangatahana ho an'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola.
Ny vanim-potoana fanodinana antonony amin'ny fandraisana ny fangatahana ho fampahafantarana ny vokatra dia telo (3) volana. Raha misy tranga miavaka dia antenaina fa ho lasa telo (3) volana ny fotoana ny fanodinana, hampahafantarina ilay tompon'andraikitra nahazoana alalana ny anton'ny fahatarana.
Ny fangatahana ho an'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola dia tsy maintsy apetraka amin'ny endrika elektronika sy vita pirinty avy amin'ny manampahefana nahazo alalana ho an'ny mpangataka.
Ny fampiharana rehetra dia tsy maintsy atao amin'ny teny anglisy.
Ny antontan-taratasy rehetra nalefa amin'ny fampiharana dia tsy maintsy amin'ny fiteny anglisy na fandikana voamarina amin'ny fiteny anglisy.
NB: Ny fandikan-teny voamarina dia midika fandikan-teny vita avy amin'ny mpandika teny matihanina izay nekena tamim-pomba ofisialy ho an'ny fitsaràna, sampan-draharahan'ny governemanta, fikambanana iraisam-pirenena na andrim-panjakana mitovy amin'izany, na raha ampiharina ao amin'ny firenena izay tsy misy mpandika nekena ofisialy. fandikan-teny natolotry ny orinasa iray izay ny andraikiny na ny orin'asa dia manatsara fandikan-teny matihanina.
REHETRA ny antontan-taratasy fanohanana rehetra takiana dia tsy maintsy ampifandraisina amin'ny fampiharana alohan'ny ahafahan'izy ireo alain'ny Unit.
Ny fangatahana rehetra dia tokony hiaraka amin'ny fanodinana tsy takiana sy ny saran'ny fahavitrihana ilaina ho an'ny mpangataka voalohany, ny vady aman-janany ary ny tsirairay avy.
Haverina any amin'ny mpandraharaha nahazo alalana ilay taratasy fangatahana tsy feno.
Raha nomena ny fangatahana zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola, dia hampandre ilay manampahefana manam-pahefana fa ny fampiasam-bola mendrika sy ny saram-pitantanan'ny governemanta dia tsy maintsy aloa alohan'ny omena ny taratasy fanamarinana ny zom-pirenena.
Raha toa ny fandavana fangatahana dia nolavina, afaka mangataka an-tsoratra ny Minisitra ny fangatahana.